Ururka Saxafiiyinta Qaranka NUSOJ oo Tababar Wariyaal ugu qabtay Baydhabo – Radio Daljir
Abriil 19, 2018 12:49 g 0
Ururka Suxufiyiinta Qaranka Soomaaliyeed ee NUSOJ ayaa maanta tababar saxaafadeed waxey maanta wariyeyaal Soomaaliyeed ugu qabteen Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay.
Tababarkan oo fursad u haley ilaa 30 wariye oo ka mid ah Suxufiyiinta ku sugan Degaanada Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayaa ujeedkiisa waxuu ahaa sidii loo kordhin la haa xirfada Suxufiyiinta.
Xoghayaha Guud ee Ururka NUSOJ, Cumar Faaruuq Cismaan oo khudbad kooban ka jeediyay furitaanka tababarkan ayaa waxuu marka hore amaan u jeediyay si dhabar adeega leh ay Suxufiiyinta ugu adeegayaan Bulshadooda.
Xoghaye Cumar Faaruuq ayaa sheegay in tababarkan uu yahay mid wax badan ku kordhinaya Xirfada Suxufiyiintii fursad u halay, islamarkaana ku sugan Degaanada Maamulka Koonfur Galbeed.
Sikastaba, Tababarkan oo maanta furmay ayaa muddo labo cisho ah waxuu ka socon doonaa Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay.
Shacabka Lascanood oo soo dhaweyeey Musharaxnimada Gen Morgan (dhegayso)